သူတို့တွေက တစ်ခုခုတော့ ကြွားနေကြတာ အမှန်ပဲ … | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Celebrity » သူတို့တွေက တစ်ခုခုတော့ ကြွားနေကြတာ အမှန်ပဲ …
သူတို့တွေက တစ်ခုခုတော့ ကြွားနေကြတာ အမှန်ပဲ …
Posted by နွယ်ပင် on Aug 9, 2011 in Celebrity, Entertainment, Style & Beauty | 44 comments
ဒါကတော့ အေသင်ချိုဆွေရဲ့ ကြွားချက်လေးပါ ….
ဒါကတော့ အေးဝတ်ရည်သောင်းရဲ့ကြွားချက်လေးပါ ….
ဒါကတော့ မော်ဒယ်မလေး စိုးပြည့်ပြည့်စံရဲ့ ကြွားချက်လေးပါ …..
လူမြင်ကွင်းမှာ မော်ဒယ် ..လူကွယ်ရင် ဖော်ဒယ်တဲ့… လမင်းကဗျာရဲ့ …
တိုးတက်ဖို့အတွက်ဦးစာပေး =မော်ဒယ် …တိုတက်ဖို့အတွက်ဦးစာပေး =ဖော်ဒယ်
ဒီကမ္ဘာမြေတခွင်ပေါ်များဝယ် သူငါအများတို့ရယ် အလှနဲ့သစ္စာကိုကွယ်ဖွေရှာမောကြတယ်……………..။
မရှိတဲ့ မိန်းကလေးတွေ ဘာမှမနာလိုမဖြစ်ကြနဲ့
အဲ…ယောက်ျားလေးတွေကတော့ ဥပက္ခာပြုနိုင်သလောက် ပြုကြပေ့ါ
လံထွက်နေတာပဲ။ good/thank ။
ဒီလိုဝတ်မှ နာမည်ကြီးကြမှာလား။ အနုပညာရှင်တွေလည်း ဒါတွေကြောင့် အကုန်နာမည်ပျက်ကုန်ကြတာပါပဲလေ။ ကိုယ့်အနုပညာကို ကိုယ်မထိန်းကြဘူး။
ကျော်သွားပြီထင်တယ် ဒီပုံစံတွေ အတိုင်းဆို ဟီးးး
အင်းတော်ကဲနေကြတယ်နော်။မထူးပါဘူး အကုန်လုံးဖော်ထားလိုက်ပြီးတာဘဲ။မပေါ်တပေါ်လုပ်နေတာကြာပါတယ် အမိုက်မတွေရဲ့ ။မကောင်းတဲ့လမ်းကိုညွှန်ပြနေကြသူများ
ဒိန် ဒိန် ဂွမ်……………………….
သူတို့ ကြည့်ရတာကလည်း မီးဖိုနား ထိုင်ပြီး မီးတောက်တွေ ကြည့်နေရသလိုပဲ ပူလောင်လိုက်တာ………..
Nay Woon Ni,
You are getting hot ???
တစ်ကယ့် တစ်ကယ် တမ်းကြ
မီးကျွမ်းပြီး တူးနေတဲ့ ငါးကင်တွေ ပါပဲ
အေသင်ချိုဆွေ သီချင်းဆိုတာ မြင်ဖူးတယ် လန့်စရာကြီး.. သူက အရှေ့နားလာပြီး စကတ်တိုတို နဲ့ ဒူးချဲပြီး.. အရှေ့မှာ လာပြီး လှုပ်ပြနေတာ.. အရှေ့တန်းက ကျားတွေကတော့ မထိတထိ လုပ်လို့ အသည်းယားလို့ ထ ခုန်နေကြတယ်။
ဒီနေရာမှာတော့ နိုင်ငံတကာအနုပညာရှင်များနဲ့ပြိုင်လို့ရပါတယ်၊ဒီမိုကရေစီရပြီ ဖော်ကြဟေ့ဆိုရင်တော့ အားပါး…ဘယ်လိုများအပြိုင်ဖော်ကြလဲဆိုရင်…လေဒီဂါဂါ တောင်ထိုင်ငိုသွားစေရမယ်။
ရှဲရှဲ……ဒိနေ့ မှ..ရွာထဲ ကိုရောက်တော့တယ်..
မနွယ်ပင်ကလဲ strn ဆိုက် ကိုဝင်ကြည့်တယ်ပေါ့
ဒီလိုဖော်တာ က သူများကို လိုက်တု တာပါ။ အနုပညာ သမားတွေ လိုက်တု ချင်ရင်အကုန်တူအောင်တုစေချင်တယ်။ အခုတော့ တကယ်တုရမဲ့ဟာတော့မတုပဲ။မဟုတ်တာတော့ လိုက်တုတယ်။ဒါလည်းတိုးတက်ခြင်းတစ်မျုိူးပါပဲလေ။ကောင်းဧ။်
သိပ်sexy ဖြစ်အောင်လုပ်ပြ နေပြတော့ မျက်စိထဲ မတိုးတော့ဘူး။ ပြောရရင် ဖော်ချင်ဖော် ချွတ်ချင်ချွတ် သိပ်တော့ပြူးပြဲမပြနဲ့ စိတ်ကုန်တယ်..။ (စိတ်မပါဘူးလို့ ပြောတာဟုတ်ဖူးနော်..ဟီး)
နောက်တချက် ဝေဖန်ရရင် (နှမသားချင်းမစာ) မြန်မာမော်ဒယ်တွေ ဝိတ်နဲနဲချဖို့လိုမယ်။ အတော်များများ ပေါင်တံ၊ခါး၊ဗိုက်မှာ အဆီတွေရှိနေတယ်။ ကိုယ့်အိမ်နီးနားချင်းနိုင်ငံများက ကိုရီးယားက ဟာတွေနဲ့ ယှဉ်ကြည့်ပေါ့နော်။
ကိုကြောင်ကြီးပြောတာ.. လုံးဝလုံးဝထောက်ခံတယ်… ဖော်ချင်ကြရင်လဲ မြင်ရတဲ့လူပိုပြီးကြည့်ကောင်းအောင် ပြုပြင်ပြီးမှဖော်ရင်တော်တော် ကောင်းမှာပဲ… တစ်ခါတစ်လေ တော်တော်ရွံစရာကောင်းနေပြီ မြန်မာမော်ဒယ်တွေဖော်တာက… မဖော်ရဘူးမဟုတ်ပါဘူး ဖော်နေကြတာပဲဖော်ကြပေါ့.. ဒါပေမဲ့ လူအများရှေ့ ချပြမှတော့..ကြည့်ကောင်းအောင်အရင် လုပ်သင့်တယ်…
ကြည်.သောသူ မြင်၏ ။ပြသောသူ ကုသိုလ် ရ၏..ကဲ ပြပါစေတော.။
ဇော်မင်းရယ်..အဲဒီလောက်မပြောပါနဲ့ကွယ်။ အေသင်ချိုဆွေကပြောမှာပေါ့။ ငါလေဒီဂါဂါလောက်တော့ မဆိုးသေးပါဘူးလို.။ လေဒီဂါဂါဆိုရင်သီချင်းဆိုရင်အတွင်းခံ ၂ထည်ဘဲဝတ်ပြီးဆိုတာ။ ပြီးတော့ဆိုနေရင်း လက်တဖက်ကအတွင်းခံ
ဘောင်းဘီထဲ ထည့်နှိုက်ထားသေးတာ။ အောက်ကကြည့်တဲ့ဂေးတွေဆိုစင်ပေါ်ရောက်လာပြီးသူ. ကိုဟ၀ှာလုပ်
သူတို့တွေ ဓါတ်ပုံရိုပြီးရင် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ပြန်မကြည့်ကြဘူးလားမသိ … ဒီလောက်ကြည့်ရဆိုးတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတွေကို …. ကိုယ်နဲ့ လိုက်မှန်း မလိုက်မှန်းမသိ … :o :o :o
အမြင်အားတွေ တနေ့ တခြားကောင်းကောင်းလာတယ် ဘာဖော်မလဲ ဘာပေါ်မလဲလိုက်ကြည့်ရလို့ 
အေသင်ချိုဆွေ ကအသက်ကလေးကခုမှ 18 သာသာပဲရှိသေးတယ်လို့ကြားတာပဲ
အင်း အဲဒါတွေ ကို http://www.myanmarcelebrity.com ရဲ့ Hip Hop Orchestra Show ပွဲ ဓါတ်ပုံနဲ့ Video တွေကိုကြည့်ပြီးသားပါ အဲဒီမှာ comment ပေးထားတာတွေ ဆိုရင် ဖတ်တောင်မဖတ်ဝင့်ဘူး U_U
hot တာနဲ့ sexy ဖြစ်တာနဲ့ ဘယ်လိုများ ကွာခြားပါသလဲ?
စစ်ကိုင်းအိုး ကောင်းတယ်လို့ ကြားဖူးတယ် …
suicide blind says:
honnn hoonnnn ပြောလိုက်ချင်ဘူးး……
ဖော်မှကျော်မယ်ထင်တယ် …. စကားအသစ်ဗျို့ …. ဖော်ရင်ကျော်မယ် … မဖော်ရင်တော့ မကျော်တော့ဘူး … ကျွန်မတို့လို မော်ဒယ်ဆိုတာ ရှိတာလေးတွေနဲ့ပဲလုပ်စားနေကြရတာပါ … အခုတော့ အတိုတော် တွေကော … ဖော်တယ် တွေကော … အားလုံးဖော်ကုန်ကြပီ …. ကျွန်တော်တောင် ပလေးဘွိုင်းမဂဇင်း ကို မြန်မာနိုင်ငံမှာ ထုက်ရင်ကောင်းမလားလို့ ………………..
နည်းပေးလမ်းပြလုပ်နေကြသော celebrity တွေကို ထိရောက်စွာအရေးယူသင့်ပါသည်
စိုးပြည့်ပြည့်စံ ဆိုတာ မြသန်းစံရဲ့ သမီး မဟုတ်လား
အဖေက နောက်ပိုင်းမှာ တရားလိုင်းကို လိုက် တရားစာတွေ ရေး
အမေက ဆရာမ ..
အစပိုင်းမှာ သရုပ်ဆောင်ပဲ လုပ်ခွင့်ပြုပါ ဆိုပြီး အခုတော့ မောတယ် လိုင်းကို လိုက်တော့မှာလား
စိုးပြည့်ပြည့်စံက ဘယ်သူ့ရဲ့ သမီးလဲတော့ မသိဘူး ဒေါက်တာရေ … သူက ဂျွန်လွင်ရဲ့ တပည့်ရင်း ပဲ .. ။ ဂျွန်လွင်ဆီမှာ မန်နေဂျာသဘောမျိုး လုပ်နေတဲ့ ကိုထွန်းနောင် (တစ်ခါတစ်လေမထွန်းနောင်) ရဲ့ တူမ … သူ့အဒေါ် .. အဲ .. သူ့ ဦးလေးကလည်း .. … ဂျွန်လွင် အကပ်နဲ့အရမ်းကို မြှောက်ပေးတယ် … လွန်ခဲ့တဲ့ လေးငါးနှစ်ကတည်းက ကြိုးစားနေတာ အခုနာမည်မကြီးရင် ဘယ်တော့မှ ကြီးမှာ မဟုတ်ဘူး … အဲ့ဒီအချိန်အောင်ရဲလင်းက ဂျွန်လွင်ဆီမှာ သင်တန်းနည်းပြ … ကြက်ရင်အုပ်နဲ့ .. အရိုးပိန်လေး … အဲ့တုန်းက
မော်ဒယ်တွေကိုကြည့်ရတာ….. ကြားထဲကတော့ ရင်မောပါတယ်…..
rain pricess says:
ကုန်းကွ ၊ ဖေါ်ပြ မှ နာမည်ရမဲ့ ၊ သူတို့ဘ၀ မလွယ်ပါလားနော်။ ။ ဂလု…..။
ဘာတွေဝတ်ထားတာလဲဟ ..အေသင်ချိုဆွေရယ် တော်ရုံပဲကောင်းပါတယ်….
၀တ်ချင်ဦးဟဲ့ ဆိုပြီး ငယ်ငယ်တုန်းက ဆရာမ ဆော်ပလော်တီးသလို ..ကြိမ်လုံးနဲ့ ရိုက်ရမယ် …
သူတို့ အဲ့ဒီလို ၀တ်နေတာ ပရိတ်သတ်တွေကလည်း အားပေးနေလို့ပါ … သရုပ်ပျက် အနုပညာရှင် စင်ပေါ်တက်လာကတည်းက ရေသန့်ဗူးစာ များများကျွေးလျှင် လူရှေ့ ဝတ်ရဲကြပါဦးမလား … ။
နွယ်ပင်ရေ ဒါမျိုးကြွားတာကတော့ကြွားပါစေကွယ် ဦးပေစိတို့ စိတ်ညစ်ခံပြီး အားပေးပါ့မယ် ဒိထက်ပိုကြွားရင် လည်းရပါတယ် ဦးပေစိ သည်းခံနိုင်ပါတယ်(ဦးကျောက်လုံးလေသံဖြင့်ပြောပါသည်။)
အခုထက်သာပိုကြွားလျှင်.. ဆေးရေးလောက်နဲ့ ပြီးမည်ထင်..
ဗိုလ်ချူပ်ပြောတဲ့ ..ဟိုနိုင်ငံ“ ” ဖြစ်ကြ ရတော့မည်ထင်..။